Into elandelayo kwiimephu zikaGoogle iya kuba kukuxela iingozi kunye neeradars | I-Androidsis
Ngalo lonke ixesha umgama phakathi kweMaphu kunye neWaze uya usiba mfutshane, ngakumbi ngezi ndaba zisibeka phambi kovavanyo olwenziwa nguG omkhulu ukuze akwazi ukunika ingxelo ngeengozi kunye neeradars kwimephu yeapp.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwaxelwa ukuba UGoogle wayesebenza ekunikeni ingxelo yeziganeko zendlela ezivela kwiimephu. Ngale ndlela, singasazi esona sizathu sokuxinana kwezithuthi esikuso.
Okwangoku, kuphela abasebenzisi abambalwa abo bahlangabezana neli nqaku litsha. Njengokuba uqala iimvavanyo ezintsha kwizinto ezintsha ezithatha ixesha ukuzenza ngendlela enamanqanaba.
Ukuba unethamsanqa elaneleyo lokuba uzifumane kwiiMaphu zikaGoogle ezinokhetho lokuxela iingozi kunye neeradars, ikwindawo yokukhangela (ngoku xa unokwenza umxholo omnyama), Nge iqhosha elitsha libekwe ezantsi kwiscreen. Ngokucinezela, unokuxelela uGoogle ukuba sifumene isehlo sendlela okanye i-radar.
Iqhosha elitsha elisebenza kuphela kwimowudi yokuhambisa kwaye libotshelelwe kwiinguqulelo ezintsha njengoko luvavanyo nje. Ngapha koko, lolunye uqikelelo kuWaze, usetyenziso oluthengwe nguG omkhulu kwiminyaka embalwa edlulileyo nalapho utsalela khona ukuphefumlela ukongeza amanqaku amatsha kwiiMaphu; nangona kungekho nanye kwezi zinto zintathu zintsha banento yokwenza nayo.
Nje ukuba usebenze kuwo wonke umntu, lo msebenzi we Iimaphu zikaGoogle ukunika ingxelo ngeengozi kunye neekhamera ezikhawulezayo Iya kukuvumela ukuba ube nolwazi oluthe kratya xa ujikeleza isixeko okanye indawo yakho. Uza kubona izaziso zengozi kunye nesilumkiso se-radar esiya kukunyanzela ukuba unciphise ukuphepha "ukuzingelwa". Kwaye ke, ungaphuthelwa zezi zixhobo ze-radar.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » UGoogle sele kuvavanya ukuxela iingozi kunye neeradars kwiimephu zikaGoogle